Shina Monoblock fantsom-bolo ZDa15 Fividianana sy Factory | Junbao
Fitaovana fanaraha-maso ny faritra
Uniton'ny herinaratra hidirana hidirana
Monoblock Valve ZT20
Monoblock Fanaraha-maso Valve DCV40
Ny fanaraha-maso monoblock ZDa15
Model ZDa-L15 miaraka amina fananganana monoblock antonony afovoany dia fantsom-pifandraisana tsy miankina amin'ny alàlan'ny orinasa. Ve Ny valin-kafatra anatiny: Ny fantsom-baravarankely ao anaty vata valve dia manome antoka ny menaka hidiran'ny hydraulic tsy haverina. ◆ Ny famoahana fantsom-batana anatiny: Ny fantsom-panafody ao anaty vatana valve dia afaka manamboatra ny tsindry miasa amin'ny rafitry ny hydraulic. Way Fomba menaka: siram-paritra, hery tsy misy ilana azy Way Fomba fifehezana: fifehezana ara-pitantanana, fanaraha-maso pneumatic, hidradrika ary fifehezana herinaratra ho an'ny safidy. ◆ ...
Vidiny FOB: 0,5 dolara amerikana - 9999 / Piece
Fahaiza-mamatsy: 10000 Piece / Pieces isam-bolana
Model ZDa-L15 miaraka amina fananganana monoblock antonony afovoany dia fantsom-pifandraisana tsy miankina amin'ny alàlan'ny orinasa.
Ve Ny valin-kafatra anatiny: Ny fantsom-baravarankely ao anaty vata valve dia manome antoka ny menaka hidiran'ny hydraulic tsy haverina.
◆ Ny famoahana fantsom-batana anatiny: Ny fantsom-panafody ao anaty vatana valve dia afaka manamboatra ny tsindry miasa amin'ny rafitry ny hydraulic.
Way Fomba menaka: siram-paritra, hery mihoatra ny safidy
Way Fomba fifehezana: fifehezana amin'ny manual, fanaraha-maso ny pneumatic, hidrolika sy ny fifehezana herinaratra ho an'ny safidy.
Construction Fanamboarana vaventy: fananganana monoblock, le-7 1-7.
◆ Fampiasana spool: O, Y, P, A.
◆ Ampiasaina am-pahalalana amin'ny rafi-pitatitra hidirana forklift, fiara ho an'ny tontolo iainana ary milina maivana.
Max. tsindry (Mpa)
Nom. mikoriana (L / min)
Mihemotra, tsindry (Mpa)
Solika hidiran'ny hidirkira
Fahamarinana fanoratana (卩 m)
Model Data Zd-L15 dimensional
Previous: Ny fanaraha-maso ny monoblock ZD102
Manaraka: Monoblock Valve ZT20
Monoblock Fanamarihana Valve SD11
Ny fanaraha-maso monoblock YOULI
Ny fanaraha-maso ny monoblock ZD102
Làlana NO19 Jinjiang, Faritra fampandrosoana an'i Huaian Hi-teknolojia, Jiangsu, Sina
Bauma CHINA 24. - 27. Novambra 202 ...
Varotra iraisam-pirenena ho an'ny milina fananganana, milina fananganana trano, milina fitrandrahana ary fiara fananganana. Ny hetsika ara-indostria lehibe indrindra sy manan-danja indrindra any Asia bauma CHINA no vondrom-piarahamonina ho an'ny As ...
Ny hetsika indostria isan-taona any amin'ny Faritra Azia-Pasifika PTC ASIA 2019, CeMAT ASIA 2019 ary ny ComVac ASIA 2019-- dia manomboka anio any amin'ny Centre International Expo Center Shanghai. Ny hetsika efatra andro dia hifarimbona amin'ny E -...